DIINTA ISLAAMKA OO SI WEYN UGU FIDAYSA MAREEKANKA
Ibraahim Saalax Aaden
Frank Primus, oo arday ka ahaa jaamacadda Stanford University sannadkii 2000,oo ku tukanaya qolka Islamic Society
�Diinta islaamka waxay ka mid tahay diimaha ugu fiditaanka badan dalka Mareekanka� hadalkan waxaa si cad u tiri mid ka mid ah mas�uuliyiinta ugu sarreeya maamulka Washington, xooghayaha arrimaha dibadda Condolisa Rice mar ay shaleey waraysi siinaysay taleefishinka carbeed ee lagu magacaabo Al-hurra.
Waxay gabadhan iyadoo hadalkeeda sii wadata markale tiri �waxaan ognahay in diinta islaamka ay tahay diin dadka ugu yeeraysa nabadda, ma dhici karto in kuwa dilka iyo ad-adayga jecel aan denbigooda ku xanbaarno islaamka� waxayna intaas raacisay inay kuwaas aynan matalayn mustaqbalka barriga dhexe iyo dunida carbeed.
Wuxuu hadalkan ku soo beegmay maalin kadib markii 2 ka mid ah ciidamada Mareekanka ee fadhigoodu yahay saldhiga milateri Bagram ee ku yaala Afghanistan ay soo islaameen, dabadeedna ay guursadeen labo gabdhood oo u dhashay Afghanistan. Way jireen dad reer galbeed ah oo soo booqday Afghanistan soona islaamay, kadib markii loo awood sheegtay xukunkii Taliban, hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee soo islaama ciidamo Mareekan ah oo jooga Afghanistan.
Masjidkii soomaalida ayay ku soo islaameen
Isla shaleey maalintii jumcada ee waraysiga laga qaaday xooghayaha arrimaha dibadda Condolisa Rice, ayaan salaaddii jumcada ku soo tukaday masjid ku yaala suuqa Karmel ee magaallada Minneapolis, waxaana salaaddii jumcada kadib shahaadada towxiidka loo qabanayay dadyow ku soo biirayay diintaan muqaddaska ah ee islaamka. Hadalkii ay tiri Rice oo aan indhahayga arkeen.
Alxamdulillaah iyo allaahu Akbar ayaan la qaadayay dadweynihii masjidka dhexdiisa ku dhawaaqayay, kadib markii ay ishooda saareen walaalo cusub oo uu Allaah ku mannaystay inay soo galaan diinta macaan ee islaamka. Waa markii iigu horeysay ee aan cagta soo dhigo suuqaan Karmel. Sannadkii hore oo aan booqasho ku imid Minneapolis, waxaan soo booqday masaajiddada ay ka mid yihiin Masjidka Abuubakar Assiddiiq, Daarul-Hijra iyo kan ku dhex yaala Suuqa Mall-24-ka. Hase ahaatee, waxyaabihii qalbigayga qaboojiyay ayaa ka mid ahaa wacdigii iyo khudbaddii isu-dheelli-tirnayd ee uu sheekhii dhalinyarada ahaa ka jeediyay masjidka Karmel.
Qodob qiimo badnaa oo i soo jiitay
Mowduuca khudbada ayuu sheekha la beegsaday MACRUUFKA oo la is faro iyo MUNKARKA oo la iska reebo. Run ahaantii si cilmiyeysan oo deggan ayuu dadweynihii dhagaysanayay tusaalooyin badan ugu soo qaadanayay qodobkan. Wuxuu muslimiintii dhagaysanaysay ku tirtirsiiyay inay u kacaan waajibka dacwada islaamka kaga aaddan walaalahooda kale, inay marwalba u nasteexeeyaan, inay kheyrka iyo salaadda ugu yeeraan, qabyaaladda iyo colaaddana dhexdooda uga digaan, jacaylka dhexdooda iyo waxyaabaha keeni karo midnimada oo la is xasuusiyo ayay ku soo wareeganaysay qodobkiisii uu khudbada kaga hadlay.
Daqiiqado markay ka soo wareegatay dhagaysigii khudbada sheekha, ayaan u soo daadegay maqaayad isla suuqa ku tiillay saan uga qadeeyo.
Dad ka mid ahaa dhagaystayaashii khudbada jumacada oo aan kula kulmay maqaayadda ayaad mooddaa inayan maqal wacdigii daqiiqado kahor loo sheegayay. Waxay si caddaaladda aad uga fog u haysteen oo ay u dacaayadaynayeen mid ka mid ah qabiillada soomaaliyeed ee siyaasadda kula jira, iyagoo kuwii la fadhiyayna aan ku jirin qof dib u xasuusiya wacdigii uu sheekha waxyar kahor sheegayay. Waxaan u fahmay inay-un tahay fadhi-ku diriryada soomaalida lagu aafeeyay sannadihii ugu danbeeyay.
Inkastoo aan marar badan maqlayay, wixii ka danbeeyay 11-kii September waxaa korodhay dadyowga ku soo biiraya diinta islaamka, haddana waxaa dhinac socday cadaadis iyo dhibaatooyin la marinayay muslimiinta dalalkan ku dhaqan. Waxaa la gubay xarumo masaajidyo ku yaala Mareekanka, waxaa dhibaatooyin loo gaystay dumar xijaaban, iyagoo inta badan ay dadka falkaas gaysanayay ay ahaayeen dad cunsuriyiin ah.
Dastuurka Mareekanka ayaa qaba in la ixtiraamo diimaha iyo dhaqamada ay aaminsan yihiin dadyowga ku nool Ameerika, waana tan keentay in ardayda muslimiinta ee dhigata Jaamacadaha Mareekanka ay helaan goobo ay ku gutaan cibaadada salaadda.
Xarumaha lagu cibaadaysto ee Jaamacadaha usa
Wargayska USA Today ayaa maalin sii dhoweyd daabacay in Jaamacadda Michigan ee Dearbom ay ku fekerayso inay ardayda muslimiinta u samayso goobo ay ku gutaan salaadda, kadib markii ay codsigan soo gudbiyeen ururka ardayda muslimiinta ee Jaamacaddaas.
Sidoo kale Jaamacadda George Mason ee ku taalla Fairfax ee gobolka Virginia ayay ardayda muslimiinta yeesheen qol ay ku gutaan cibaadada salaadaha , iyagoo labo meel u kala qaybiyay ragga iyo dumarka.
Sida Wargaysku xusay, waxaa jira 17 jaamacadood oo Mareekanka ku yaalla oo leh xarumo ay muslimiinta ku gutaan cibaadooyinka khaaska ah, waxaana jaamacadahaas ka mid ah Jaamacadda Boston, Jaamacadda George Washington iyo Jaamacadda Temple, halka ay ugu yaraan ay jiraan 9 jaamacadood oo leh qolal salaadda lagu tukado, ayna ku jirto Jaamacadda Stanford iyo Jaamacadda Virginia.
Dalka Uk ayaa guud ahaan jaamacadihiisa ku yaalaan xaromo masaajidyo iyo maktabado laga heli karo kutubta ka hadla guud ahaan aqoonta islaamka. Toban jamaacadood qiyaastii oo aan horey u soo booqday ayaan ku soo arkay xarumo lagu guto cibaadooyinka sida salaadda iwm, halka sidoo kale qofkii doonaya inuu diinta wax ka ogaado uu fursad u helayo inuu la kulmo Caalim diinta islaamka si wacan u yaqaana.
Hase ahaatee, dalka Denmark oo aan degganahay ayaa weli arrintan ku dhiiran. Jaamacadda Koonfurta Denmark eek u taalla magaallada Odense ayaan weli ardayda muslimiinta ku guuleysan inay helaan goob ay ku gutaan salaadda, iyagoo markiii iigu danbeysay ay la kulmeen diidmo kala duwan oo ku wajahan codsigoodaas.
Ugu danbeyntii, waxaan qoraalkayga ku soo gunaanadayaa hadalkii dahabiga ahaa ee uu yiri Rasuulka (scw) 'diintan waxay gaari doontaa halka uu gaaro maalinta iyo habeenka'.
Qoraladii hore ee Ibraahim Saalax